अमेरिकाले ९ हजार नेपालीलाई देश निकाला गर्दै ! के हो कारण ? — Sanchar Kendra
अमेरिकाले ९ हजार नेपालीलाई देश निकाला गर्दै ! के हो कारण ?
अमेरिकी सरकारले करिब ९ हजार नेपालीलाई देश निकालाको तयारी गरेको छ ।
महाभूकम्पमा ज्यान गुमाएका आफन्त भेट्ने नेपाल आवतजावत गर्न सहज होस् भन्ने प्रयोजनका लागि अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई टीपीएस सुविधा दिएको थियो । सो स्किमअन्र्तगत झण्डै १५ हजार नेपालीले टीपीएस सुविधा लिएको भए पनि अहिले झण्डै ९ हजार मात्रै अमेरिकामा रहेको विभागको तथ्यांक छ ।
२०७५ बैसाख १२ मा प्रकाशित ।
करिब २ वर्षपछि कोरियामा कामदार पठाउन शुरू, आजै कति जना जाँदैछन् ?
अमेरिकाको ओहायोमा आगलागी हुँदा ५ नेपालीभाषीको मृत्यु
नेकपा प्रवासी मोर्चा विवाद- इञ्चार्ज कञ्चनद्वारा वेद बोहोरामाथि कारवाही, विज्ञप्तिसहित